Dakota Wicohan waxay xubnaha bulshada ku xiraysaa tababarka, aqoon isweydaarsiyada, iyo tababarada shaqo ku barashada.
Taageerada Ururada Fanka ee asaliga ah iyo kuwa asaliga ah ayaa muhiim u ah Minnesota
Sida lagu muujiyey Qaab-dhismeedka Istaraatiijiga ah, sinnaantu waa mid ka mid ah qiyamka ugu muhiimsan ee 'McKnight'. Waxaan aragnaa horumarin kala jaad jaad ah, sinnaan, iyo ku darid dhamaan barnaamijyadeena udub dhexaadka u ah dhismaha Minnesota oo u shaqeysa qof walba. Hal dariiqo oo muhiim ah oo aan ugu noolnahay qiimahan ayaa ah taageerista fanka iyo ururada dhaqanka oo ay hogaaminayaan dadka midabka leh iyo dadka asaliga ah.
Farshaxanka asaliga ah iyo farshaxannadu waxay gacan ka geystaan dhowrista qaababka nolosha caadiga ah iyo luqadaha, xoojinta aqoonsiyada dhaqameed, waxayna sii wadaan qiimeynta caqiido ee dhaqanka. Si kastaba ha noqotee, sida lagu sheegay warbixinta cilmi-baarista Sheegashada dhabta ah ee Asalka, casuumad iyo fikradaha qaldan ee sunta ah ee ku saabsan Dadka asaliga ah iyo kuwa asaliga ah waxay sii wadaan inay u horseedaan xaqiraad iyo maal-gelinno kala-duwanaan xagga dadka asaliga ah iyo kuwa asaliga ah, ururada, iyo bulshada.
Fahamka cilmi baaristaan iyo xaqiiqda waxay kicisay kooxda farshaxanka ee McKnight inay ballaariso xiriirada fanaaniinta iyo ururada farshaxanka bulshooyinka ka maqnaa jagada McKnight iyo in ay bartaan ururada kala duwan ee fanka oo ay hogaamiyaan dadka asaliga ah iyo u adeegaya fanaaniinta asaliga ah ee beeshooda. .
Qaar ka mid ah dadaalladan ayaa laga dheehan karaa deeq-bixiyaha 'McKnight' ee rubuc-rubuc-rubuc-ka 2019, iyadoo guddigu ay ku abaalmarisay $240,000 ururada fanka oo ay hogaaminayaan dadka asaliga ah. Guud ahaan rubuc-rubuc, McKnight wuxuu abaalmariyey 179 deeqo oo iskucelis ah $29.9 milyan. Liiska buuxa ee deeqaha la ogolaaday ayaa laga heli karaa annaga keydka macluumaadka.
Rubuc qarnigii la soo dhaafay, McKnight wuxuu siiyay laba sano $70,000 deeq Dakota Wicohan si loo ilaaliyo loona soo nooleeyo Dakota oo ah luuqad nool, iyada oo loo marayo, loo gudbiyo dariiqooyinka nolosha ee Dakota jiilalka mustaqbalka.
Dakota Wicohan waxay bixisaa fursado ay ku wadaagaan, waxbarida, iyo ku bartaan qaababka farshaxanka Dakota ee wali dhaqan ahaan khatar ku ah, oo ay ku jiraan daboolida maqaarista, xaraashka, qulqulatada, faras hoosaadka, fadhiga, iyo ubaxa. Dhammaan tacliinta ayaa ah tababar-xirfadeed, maadaama barashada isku dhafka ah iyo waxbarida had iyo jeer ay ahaayeen habka Dakota.
Intaa waxaa sii dheer, Dakota Wicohan waxay siisaa taageero joogto ah farshaxan yahanad horumarsan oo ku saabsan warbaahinta ay doorteen. Taageeradani waxay ku imaaneysaa qaabab fara badan, laga bilaabo ceymiska illaa goobta shaqada illaa saadka illaa lacag bixinta safarka, dhammaantood waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo wax kasta oo lagama maarmaan u ah farshaxanka asaliga ah si ay u noolaadaan iyo farshaxannadu si ay ugu guuleystaan.
Waxaan aragnaa horumarin kala jaad jaad ah, sinnaan, iyo ku darid dhamaan barnaamijyadeena udub dhexaadka u ah dhismaha Minnesota oo u shaqeysa qof walba. Hal dariiqo oo muhiim ah oo aan ugu noolnahay qiimahan ayaa ah taageerista fanka iyo ururada dhaqanka oo ay hogaaminayaan dadka asaliga ah.
McKnight wuxuu kaloo siiyay laba sano $30,000 deeq Iskaashi Meel Wadaag, koox ay hogaaminayaan fanaaniinta asalka u dhashay ayaa diirada saaray hagaajinta cilaaqaadka ka dhexeeya dadka, biyaha, iyo dhulka. Kaqeybgaleyaasha iskaashigu waxay wadaagaan xiisaha wabiga Mississippi oo ah meel bogsiinta iyo meel u baahan bogsiin iyo waxay ku hawlan yihiin bogsashada heer qaar - shaqsi, dhaqan, bulsho, ama deegaan.
Wadashaqeynta Goobta waxay leedahay kulanno joogto ah oo bixiya fursado naadir ah dadka aan caadi ahaan qolka isla joogin si ay u tixgeliyaan shaqadooda qeyb ka mid ah bulshada weyn. Waxay ku siineysaa meel dadku ku soo qaadan karaan habab kala duwan oo looga wada hadlo iyo wax looga qabto dhibaatooyinka la wadaago.
Iskaashatada Goobta Caafimaadka waxay martigelisay xaflad ku taal wadada loo yaqaan 'Minneapolis Riverfront' si loo baaro xiriirada udhexeeya fahamka asaliga ah ee goobta, deegaanka, biyaha, fanka, iyo wabiga Mississippi. Sumcadda Sawirka: Wadashaqeynta Goobta Bogsiga
Wadashaqeyntu waxay salka ku haysaa qaabkeeda 'Ddote', oo ah eray 'Dakota' oo macnaheedu yahay wareerka biyaha (wabiyada Mississippi iyo wabiyada Minnesota) laakiin sidoo kale jahwareerka macno weyn. Wadashaqeynta ayaa dhiirigelineysa isku xirnaanta danaha ka dhexeeya dadka aqoonsanaya in wabiga uu muhiim u yahay abuuritaanka beel caafimaad qaba, iyo in dadaal ballaaran ay bulshada u baahan tahay si loo daweeyo wabiga.
"Hay'adaha taageera bulshooyinka kala duwan ee farshaxannada shaqeynaya sida kuwan oo kale waxay muhiim u yihiin guusha xeeladeena," ayaa uu yiri Debby Landesman, gudoomiyaha guddiga McKnight Foundation iyo madaxweynaha ku meel gaarka ah. “Minnesota waa meel firfircoon maxaa yeelay tabarucyada ururrada farshaxanka ee asaliga ah.”
Guddiga iyo Isbedelka Shaqaalaha
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku soo dhaweyno Luther Ragin, Jr., agaasimeyaashayada. Isagu waa madaxweynaha howlgabnimada ah iyo maamulaha Shabakadda Maalgashiga Saamaynta Caalamiga ah. Luther sidoo kale wuxuu ka adeegaa maalgashiga McKnight iyo guddiyada maalgashiga himilada. Waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa guddiga mudada dheer iyo xubin ka mid ah qoyska Meghan Binger Brown maadaama ay ka soo laabatay cilad darteed. Intaa waxaa sii dheer, waxaan uga mahadcelineynaa David Crosby wax ka badan sideed sano oo ah guddiga guddiga dadaalka badan. Intii uu ka degay guddiga, wuxuu sii wadaa inuu u adeego guddiga maalgashiga.
Intaas waxaa sii dheer, waxaan haynaa dhowr kala-guur shaqaale oo aan la wadaagi doonno. Sidii horey loogu dhawaaqay, Nichol Higdon wuxuu nagu soo biiray gudoomiye ku xigeenka maaliyada iyo howlaha. Waxaan rajeyneynaa inaan dhowaan ku soo dhoweyno shaqaalaha cusub kooxaha isgaarsiinta iyo farshaxanka.
Sidaan qorrax dhaca qoraxda barnaamijka Mississippi River, waxaan ku idhi sarkaalkii barnaamijka Julia Olmstead. Agaasimaha barnaamijka Mark Muller wuxuu la joogi doonaa Mu'asasada illaa iyo bisha Feebaraayo. Waxaan uga mahadcelineynaa labadaba dadaalkooda ku aaddan tayada biyaha iyo adkeysiga Webiga Mississippi. Bixiyeyaasha wabiga ayaa wali la xiriiri kara Sarah “Sam” Marquardt wixii su'aalo ah.
Ugu dambeyntiina, waxaan u rajeyneynaa maamulka barnaamijka 'Midwest Climate & Energy' Tim Murphy sidoo kale inuu madaxeeda dibadda u aado simistarka ugu dambeeya ee dugsiga qalin-jabinta.